Xog: B/Caalamka oo Axmed Madoobe iyo Deni ka diiday dalab ka dhan ah Farmaajo - Caasimada Online
Home Warar Xog: B/Caalamka oo Axmed Madoobe iyo Deni ka diiday dalab ka dhan...
Xog: B/Caalamka oo Axmed Madoobe iyo Deni ka diiday dalab ka dhan ah Farmaajo
Muqdisho (Caasimada Online) – Maamul goboleedyada Jubaland iyo Puntland ayaa ku guul-darreystay mid ka mid ah shuruudihii ay ku xireeen in dib loo billaabo wada-hadallada doorashada ee kala dhaxeeya madax goboleedyada kale iyo Farmaajo.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Caasimada Online u sheegay in wakiilada beesha caalamka ay diideen dalabkii Axmed Madoobe iyo Saciid Deni ee ahaa in Farmaajo uusan shir guddoomin wada-hadallada, una sheegeen inay shuruudaas ka tanaasulaan.
Dalabkan ayaa ka mid ahaa dhowr shuruud oo hortaagan wada-hadallada, oo sidoo kale ay ku jiraan ajendaha shirka, iyo amniga goobta shirka. Axmed Madoobe iyo Deni ayaa ku doodayey in muddo xileedka Farmaajo uu dhammaaday, sidaas darteedna uusan haysan sharciyad uu shirka ku hoggaamiyo.
Wakiilada beesha caalamka ayaa sidoo kale Axmed Madoobe iyo Saciid Deni u sheegay inaysan suurta-gal aheyn in la fuliyo mid kasta oo ka mid ah dalabyada ay wataan, sidaas darteedna kula taliyeen inay ka tagaan kuwa aan muhiimka aheyn.
Arrintan ayaa Axmed Madoobe iyo Deni looga dhaadhiciyey kulan ay si gaar ah Axaddii ula yeesheen wakiilada beesha caalamka, waxaana goobjoog ka ahaa safiirka Mareykanka Donald Yamamoto iyo ergeyga QM ee Soomaaliya James Swan.
Si kastaba, wararka ayaa sheegaya in tani beddelkeed la fulin doono inta badan dalabyada kale ee ay wataan Saciid Deni iyo Axmed Madoobe, si wada-hadallada ay dib ugu billowdaan, heshiisna looga gaaro doorashada.